App Zone ဆိုသည်မှာ ထောင်ပေါင်းများစွာသော Application တွေကို ဒေါင်းလုတ် ရယူနိုင်တဲ့ Application Store တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ App Zone ကိုအခမဲ့ရယူပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရေပန်းစားလူကြိုက်များ နေတဲ့ Application တွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်စဉ် ဒေတာ အသုံးပြုမှု အတွက်ကို သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း အတိုင်းကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
App Zone နဲ့ဆိုရင် Email လဲမလို App Store တွေ Google Play Store တွေ မရှိပဲ Application တွေကို ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် နေရာဒေသ ကန့်သတ်ချက်မရှိပဲ မည်သည့် Application ကိုမဆို ရယူနိုင်မှာပါ။
အကြိုက်ဆုံး Application တွေကို အခုပဲ ဒေါင်းလုတ်ရယူလိုက်ပါ။ App Zone ကို https://zone.ooredoo.com.mm/mm/ooredooapps.aspx မှာ အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။
၁. App Zone ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
App Zone ဆိုတာ အခြားအက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုဒေါင်းလုတ်ချနိုင်မယ့် အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးတစ်ခုပါ။ App Zone မှာ လူကြိုက်များအက်ပလီကေးရှင်းပေါင်း ၁၁၀,၀၀၀ ကျော်ကို ရှာတွေ့နိုင်မှာပါ။ အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးကို အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်မှာပါ။ အက်ပလီကေးရှင်းထဲဝင်ကြည့်တာနဲ့ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရာမှာ ဒေတာအတွက် သတ်မှတ်ကုန်ကျစရိတ်ရှိမှာပါ။
၂. App တွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော software များကဘာတွေလဲ။
Android Version 4.0.3 နှင့်အထက်ပါ။
၃. App Zone ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ရယူနိုင်မှာလဲ။
https://zone.ooredoo.com.mm/mm/ooredooapps.aspx ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ယူရမှာပါ။ ဒေတာအတွက်ကုန်ကျစရိတ်မရှိပဲ အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၄. App Zone အတွက် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ စာရင်းသွင်းရမလဲ။
App Zone ကိုသုံးဖို့ရာ အကောင့်တစ်ခုဖန်ုတီးနေစရာမလိုပါ။ App Zone ကို ဖုန်းထဲဒေါင်းလုတ်လုပ်ထည့်၊ ပြီးရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေကို ချက်ချင်းဒေါင်းလုတ်ဆက်လုပ်ရုံပါပဲ။
၅. အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးကနေတစ်ဆင့် ဒေါင်းလုတ်လုပ်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲ။
နေရာဒေသကန့်သတ်ချက်ရှိတတ်တာမို့ ဒါမှမဟုတ် စာရင်းသွင်းတဲ့အလုပ်က ရှုပ်ထွေးတာမို့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေကို တချို့ပုံမှန်အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးတွေကိုသုံးလို့ ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ App Zone မှာ နေရာဒေသကန့်သတ်ချက်မရှိတော့ပါ၊ ရှုပ်ထွေးတဲ့ စာရင်းသွင်းလုပ်ငန်းစဉ်လည်း မရှိတော့ပါ။
၆. အက်ပလီကေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ မှတ်ချက်ပေးချင်တာ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
မှတ်ချက်ပေးနိုင်ဖို့ရာ အကောင့်တစ်ခုအရင်လုပ်ပါ၊ ဒီအတွက်တော့ စာရင်းသွင်းရမှာပါ။ အက်ပလီကေးရှင်းပင်မစာရင်းရဲ့ဘေးဖက်ဘားထိပ်ကခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး စာရင်းသွင်းပေးပါ။ အဲဒီအခါ အီးမေးလ်နဲ့အတူ စကားဝှက်ကိုထည့်ပေးရမှာပါ။
၇. ဘေးဖက်ဘားထိပ်က ပင်မစာရင်းဆိုတာ ဘယ်လိုပါလိမ့်။
က. စာရင်းသွင်းရမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် အက်ပလီကေးရှင်းထဲဝင်ဖို့ပြောတာလား
App Zone မှာ အကောင့်တစ်ခုလုပ်ဖို့ စာရင်းသွင်းမယ့်သူတွေအတွက်သာ ပြောတာပါ။ စာရင်းသွင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် မှတ်ချက်ဝင်ပေးနိုင်ပါပြီ။
ခ. အရင်ဗားရှင်းကိုသာ ပြန်သုံးချင်တဲ့အခါ
ဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းမှာ “အဆင့်လျှော့ရန်”ဆိုတဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ကို တွေ့နိုင်မှာပါ။ အရင်ဗားရှင်းအဆင့်ကို ပြန်နှိမ့်ပေးမှာလို့ပြောတာပါ။ ကိုယ့်ရဲ မိုဘိုင်းပစ္စည်းအနေနဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းရဲ့နောက်ဆုံးဗားရှင်းနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် အရင်ဗားရှင်းကိုပဲ ပိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အခါ အခုလိုလုပ်နိုင်မှာပါ။
ဂ. ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့အတွက် အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း
ဝိုင်ဖိုင်မိတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပေးဖို့ရာ အစီအစဉ်ချနိုင်မယ့် App Zone ရဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်တစ်ခုပါ။ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်က အစက်လေးသုံးစက်ကိုထိလိုက်ပြီး “ဒေါင်းလုတ်ချအစီအစဉ်”ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီလိုဆိုရင် ဝိုင်ဖိုင်မိတဲ့အချိန်မှသာ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ရွေးပေးထားတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပေးသွားမှာပါ။
ဃ. အဆင့်မမြှင့်ပဲ ချန်ထားခဲ့သည့်များ
ဒါဟာ အဆင့်မမြှင့်ချင်ဘူးလို့ ကိုယ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းစာရင်းကို ပြန်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ပါ။ အဲဒီနေရာကနေတစ်ဆင့် အက်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုချင်းစီကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အက်ပလီကေးရှင်းအုပ်စုလိုက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင့်မြှင့်မယ့်အုပ်စုထဲပြန်ထည့်ပေးနိုင်မှာပါ။
အခုအပိုင်းဟာ ဒေါင်းလုတ်ချဖို့အတွက်စည်းကမ်းသတ်မှတ်တာ၊ အမာထည်စစ်ထုတ်တာ၊ အဆင့်မြှင့်တင်တာ၊ မှတ်ဥာဏ်အသုံးအစွဲနဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းကို အတွင်းကျကျထည့်သွင်းတာအပါအဝင် အက်ပလီကေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင် လိုအပ်သလိုထိန်းကျောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပါ။
“ဆက်တင်” နေရာမှာ အောက်ကအတိုင်းတွေ့ရမှာပါ။
ဝိုင်ဖိုင် - ဝိုင်ဖိုင်နဲ့ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ
မိုဘိုင်း 3G/4G - မိုဘိုင်းကွန်ရက်နဲ့ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ
အမာထည်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက် - SDK ဗားရှင်း၊ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား၊ ESGL ဗားရှင်း၊ ဖန်သားပြင်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူ CPU ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကို သိရမှာပါ။
အက်ပလီကေးရှင်းများကိုစစ်ထုတ်ခြင်း - ဒီအချက်ကိုရွေးပေးထားတဲ့အခါ အက်ပလီကေးရှင်းတွေရှာတဲ့အခါ မိမိမိုဘိုင်းပစ္စည်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေကို ရလဒ်မှာ ထည့်ပြီးဖော်ပြပေးမှာမဟုတ်ပါ။
App Zone ကို အလိုအလျောက်အဆင့်မြှင့်တင်စေခြင်း
အလိုအလျောက်အဆင့်မြှင့်တင်ပါ - ဒီအချက်ကိုရွေးပေးထားရင် App Zone နဲ့ပတ်သက်လို့ (ဥပမာ - ဗားရှင်းအသစ်ထွက်တဲ့အခါ၊ ချွတ်ယွင်းမှုရှိရင် ဒီတစ်ခေါက်မှာ ပြင်ပေးထားတာ၊ စသည်ဖြင့်) အလိုအလျောက် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးသွားမှာပါ။
ဗားရှင်းအတွက် အသိပေးခြင်း - ကိုယ်ထည့်သွင်းထားတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေအတွက် ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ရင် အသိပေးသွားမှာပါ။
အလိုအလျောက်အဆင့်မြှင့်တင်စေခြင်း - အက်ပလီကေးရှင်းတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ဘာမှလုပ်ပေးနေစရာမလိုပဲ အလိုအလျောက်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်သွားမှာပါ။
စစ်ထုတ်ပြီးမှအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း - အဆင့်မြှင့်တင်ချင်တယ်ဆိုပေမယ့် တခြားကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေအတွက်ဆိုရင် လာပြီးအသိပေးမနေဖို့ရာ ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှာပါ။
ဗားရှင်းငြိမ်ပြီဆိုမှသာ အသိပေးပါ - နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းမဟုတ်ပေးရင် (စမ်းသပ်နေဆဲအဆင့်ဆိုရင်) လာပြီးအသိပေးနေမှာမဟုတ်ပါ။
အလိုအလျောက်သွင်းလိုက်ပါ - ဝိုင်ဖိုင်မိပြီဆိုတဲ့အခါ အရင်အစီအစဉ်ဆွဲထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ဘာမှဝင်ပါစရာမလိုပဲ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပေးသွားမှာပါ။
အချက်အလက်တွေနဲ့အတူ စနစ်ချထားတာတွေကို ရှင်းပစ်လိုက်ပါ - ဒီအချက်ကိုရွေးပေးထားရင် မိုဘိုင်းပစ္စည်းထဲမှာကိုယ်သိမ်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့အတူ သက်ဆိုင်ရာစနစ်ချထားတာတွေကိုပါ ဖျက်ပစ်လိုက်မှာပါ။
ယာယီသိမ်းပေးထားသည်တို့ကို ရှင်းပစ်ခြင်း - ဒီအချက်ကိုရွေးပေးထားရင် ကိုယ့်မိုဘိုင်းပစ္စည်းထဲမှာရှိတဲ့ ယာယီသိမ်းပေးထားတာတွေကို ရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံအသစ်တင်တဲ့အခါ ခဏသိမ်းပေးထားတဲ့ ပုံအဟောင်းကိုဖျက်ပစ်ရမှာပါ၊ ဒီအချက်ဟာ အရေးကြီးပါတယ်။
ခဏသိမ်းထားမယ့် ဒေါင်းလုတ်ချထားတဲ့ ဖိုင်အရွယ်အစား (မဂ္ဂါဘိုက်) - apk ဖိုင်တွေကို အများဆုံး ဘယ်လောက်ပမာဏအထိသာ မိုဘိုင်းပစ္စည်းထဲမှာသိမ်းမယ်ဆိုတာ သတ်မှတ်ပေးနိုင်မှာပါ။
အက်ပလီကေးရှင်းကို အတွင်းကျကျသွင်းပေးပါ - အက်ပလီကေးရှင်းသွင်းတဲ့အခါ တစ်ဆင့်ကျော်ပြီး သွင်းနိုင်မှာပါ။ ဒီအချက်ကိုရွေးပေးထားတဲ့အခါ အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ (အဆင့်ဆင့်ဝင်လုပ်နေစရာမလိုပဲ) မိုဘိုင်းပစ္စည်းထဲ တစ်ခါတည်းသွင်းပေးသွားမှာပါ။
အခုအပိုင်းကနေတစ်ဆင့် အသေးစိတ်တုံ့ပြန်ချက်တွေ ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒီအတွက် လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုဖြည့်ပေးပါ။ ဒါ့အပြင် အထောက်အကူရဖို့ရာ ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံတွေကို တွဲထည့်ချင် တွဲထည့်ပေးပါ။
ယခုဖော်ပြပါအချက်အလက်တို့နှင့်ပတ်သက်ပါက အူရီဒူးမြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် လိုအပ်သလိုထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းအားဖြင့် အချိန်မရွေးရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့် (သို့) အချိန်မရွေးပြုပြင်ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်သည် အူရီဒူးမြန်မာလက်ဝယ်တွင်ရှိသည်။